Chilli Gold एक निश्चित5paylines संग 40-reel भिडियो स्लट मिसिन हो। यो अद्भुत स्लॉट खेल लाइटनिंग बक्स गेम्स द्वारा संचालित छ र जंगली प्रतीकहरु, धेरै नियमित प्रतीकहरु र एक मुक्त बोनस दौर को सुविधाहरु प्रदान गर्दछ जसले तपाईंको जीतहरु लाई बढावा दिन मा मदद गर्नेछ। यो खेलले एक मानक खजाना र अन्य पुरस्कारहरू प्रदान गर्दछ जसले हजारौं सिक्का लायक छ। स्लॉट खेल तत्काल प्ले मोडमा उपलब्ध छ र यो खेलको बढावा गर्ने ग्राफिक्स र ध्वनि प्रभावहरूसँग पूरा हुन्छ माहौल.
एक मसालेदार स्लॉट खेल
तपाईं आफ्नो कुखुरालाई कति कति मनपर्छ? चिली गोल्ड एक मेक्सिकन जीवन शैली र मसालेदार मिल्दोमा राखिएको छ। प्रामाणिक मेक्सिकन संगीतले तपाईंलाई खेलमा प्रयोग गर्दछ जहाँ तपाइँ सबै मकहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन माराकास, गिटार, हम्ब्रे, तोता, रातो काली मिर्च, कर्करास, र घाँटी सहित विषयमा सम्बन्धित छन्। यसको पृष्ठभूमि मेक्सिकन दृश्यहरू, एक व्यक्ति एक ठूलो टोपी लगाईएको छ, र रातो मिर्च पकडिएको क्लोक संग समावेश गरिएको छ। त्यहाँ बायाँ तिर र सबै क्यापस को एक किसिमको एक उत्साहित लग रहेको मल पनि छ। Mule र Hombre Chilli गोल्ड स्लॉट खेल को लागि एक हास्य पक्ष थप्नुहोस्।
चिली सुन अपडेट गरिएको: जनवरी 15, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 चिली सुन
2.0.0.1 सिंहको मासु
2.0.0.3 बिग5कालो जैक सुन
2.0.0.5 भाग्यशाली राशि
2.0.0.6 मृत वा जिउँदै
2.0.0.7 Totem खजाना
2.0.0.8 जंगली जीत बन्नुहोस्